Veloren: Open Source Video Game sitere n'ike mmụọ nsọ Cube World | Site na Linux
Veloren ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na-emeghe isi iyi egwuregwu vidiyo. Ọ dabere na Cube World, nwere ụdị njirimara ụwa na-emeghe nke na-agwakọta isiokwu RPG. Ọ bụ n'efu, ma dakọtara na Windows, Linux na macOS,
Kpomkwem na ya kacha ọhụrụ version maka ugbu a, na-akwado maka Apple sistemụ agbakwunyere. Ma dị ka ị nwere ike iche n'echiche ya, ị chọghị ole na ole ihe onwunwe dị ike ịmegharị. N'okwu a, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na GPU ọ bụla na-akwado OpenGL 3.2 ma ọ bụ karịa, 4GB nke RAM, multi-core CPU, na 2GB nke ohere efu na draịvụ ike gị.
E mepụtara egwuregwu vidiyo site na iji Rust asụsụ, nke na-ewu ewu karia ide ihe oru ngwanrọ. Ha elewo anya na Cube World na Legend of Zelda: Ume nke Anụ maka ume.
N'oge ọ bụ na a pụtara n'oge ogbo nke mmepe, na nsụgharị 0.x ka i si hụ. Ya mere, a ka nwere ọtụtụ ihe iji melite, ọ bụ ezie na ọ rụọlarị ọrụ ma ị nwere ike ịnwale ya.
Na ntọhapụ kachasị ọhụrụ enwere ụfọdụ mma ndozi dị ka sistemụ egwu, obere mini-map ka mma nke ị nwere ike mbugharị ma gbanwee, mkpụrụ edemede na igodo nwere ike idozi ya, ntọala gamma, nsonaazụ ụda ọhụrụ, mwakpo ọgụ ọhụrụ, usoro njikwa ngwa ọgụ, mmelite nkwado gamepad, wdg
Maka njirimara ndị a niile, Veloren abụrụla otu aha egwuregwu vidiyo na-ekwe nkwa na-ekwe nkwa n’etiti ndị niile dị ugbu a. Eziokwu bụ na ọ dị oke mma, ma ị ga - ahụ n’onwe gị ihe ị ga - eji egwuregwu a mee. Gịnị ka ị ga-atụfu? Ọ bụ n'efu, n'ihi ya, m na-akpọ gị òkù ka ị nwalee ya na distro kachasị amasị gị… Ọzọkwa, ngwugwu ahụ na-atụle ihe dịka 99,9MB ma dị maka 64-bit Linux.
Ibudata - Free Veloren
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » Veloren: egwuregwu vidiyo na-emeghe emeghe nke Cube World dere
Enweghị m ike ijikwa ụdị eserese ahụ, ọ bụ naanị ịhụ ha na ọ na-ewe m iwe, n'agbanyeghị egwuregwu ahụ.